Xog: Maxaa Sababay in uu Xisbiga Waddani ku Hakiyo la Shaqeynta Guddida Doorashooyinka Somaliland - Wargane News
Home Somali News Xog: Maxaa Sababay in uu Xisbiga Waddani ku Hakiyo la Shaqeynta Guddida...
Odorosayaasha Doorashada oo dhaliilay hab-dhaqanka Xisbiga WADDANI iyo go’aanka uu ku hakiyey la shaqeynta Guddida Doorashada
Saraakiisha Xisbiga WADDANI u qaabilsan la shaqeynta Guddida Doorashada, ayaa sheegay inay hakiyeen la shaqeyntii Guddida Doorashada, kaddib markii wax laga qaban waayey cabashooyin badan oo ay gudbiyeen.
Xuseen Axmed Caydiid oo kamid ah xubnaha Xisbiga Mucaaridka ah ee WADDANI u qaabilsanaa la socodka howlasha tirinta codbixinta, ayaa sheegay inay hakinta wada-shaqeynta Guddidu sii socon doonto ilaa xisbigu go’aan kama dambeys ah soo saarayo.
Waxay sheegeen inay u muuqdeen raadad muujinaya in khaladdaad dhaceen, laakiinse si cad farta ugumay fiiqin waxyaabaha musuqmaasuq ula muuqday.
Ma jiro wax war ah oo ay Guddida Doorashaddu ilaa hadda ka soo saareen talaabadan uu xsbiga WADDANI ku joojiyey wada-shaqeyntii ka dhaxaysay, hase ahaatee isla wakhtiga ay hadleen Saraakiisha Xisbigaasi Guddida Doorashadu waxay sheegeen in howsha tirinta codbixinta Doorashadu si fiican u socoto, ayna jirin wax mushkilad ah oo ilaa hadda la soo dersay.
Ilo wareedyo madaxbanaan oo Gobanimonews ka heshay sababta keentay go’aanka Xisbigu qaatay, ayaa tibaaxaya inay shaki ka qabaan in natiijada Doorashada lagaga sareeyo, sidaas darteed ay dhici karto inay abuurayaan isku-day ay madmadow ku gelinayaan Natiijada Doorashada.
Ilo-wareedyada oo u dhuun-daloola qaabka ay u socoto tirinta codadku, ayaa sheegaya in Xisbiga talada haya ee Kulmiye uu aad ugu horeeyo natiijooyinka hordhaca ah ee ka soo baxaya Gobolada dalka badankooda, iyadoo meelihii Xisbiga WADDANI uu aadka ugu xisaabtamayey codkooda qaarkood lagaga sareeyo, kuwana lagu dhadhawyahay.
Sidaas darteed ayey dadka odorosaya arrimahaasi ay cabashooyinka Xisbiga WADDANI ku sifeynayaan qorshe kale oo xisbigaasi ku carqaladaynayo hufnaanta Doorashada. Dhankooda Masuuliyiinta Xisbigaasi shaki kagama jiro inay adag tahay in tirinta codadka lagu shubto iyo in si sahlan musuqmaasuq u dhaco.
Geesta kale, tan iyo markii goobaha codbixinta Doorashada la xidhay isla habeenkiiba waxa ay taageerayaasha Xisbiyadu baraha bulshada ku faafinayaan farriimo ay guusha doorashada ku kala sheeganayaan, taasoo aan micnaheedu ahayn inay hayaan natiijo dhab ah, balse ay si male-awaal ah wax isugu geysanayaan.
Guddida Doorashada, ayaa lagu wadaa inay wixii ka dambeeya maalinta berri ku dhawaaqaan natiijada Doorashadaas, taasoo ay Shacbigu u dhegtaagayaan.
Inta ka horaysa shaacinta natiijada Doorashada, wadnaha ayey farta ku hayaan Shacbigu, waxaana dareenkoodu uu muujinayaan inay si weyn uga soo horjeedaan in Khilaaf yimaado.
Somaliland: SL Foreign Representatives in key Recognition Talks
Somaliland: Duur Iyo Maxamed Kaahin Oo Weedho Xaasaasiya Is Waydaarsaday.